Yusuf Garaad: Soomaaliya iyo USA - Warkii hore War soo Dhaaf
Car yaa Maanta Soomaali u Istaaga?
Wendy Sherman, Kaaliyaha Xoghayaha A. Dibadda ee USA
Ma tahay hoggaamiye Soomaaliyeed? Ma la xanuunsaneysaa dhibka Soomaalida meel kasta ku haysta? Ma dhibsaneysaa qab jabka iyo xuquuq la'aanta Soomaalida haysata? Ma ka walaacsan tahay mustaqbal xumada haysata da' yarta? Ma kartaa in aad Soomaali u istaagto? Ma awooddaa dad kala irdhoobay in aad gacan ku siiso in ay isla fahmaan waxa dantoodu ay tahay? Ma ku dhacdaa in aad ku dhaqanto waxa uu qabiilkaagu kaa filayo wax ka duwan? Mise waxa qabiilku isu meeriyo ayaad adiguna ku hadaaqdaa?
Dowladda adduunka ugu dhaqaalaha badan, ugu militeriga xooggaan, xagga Diplomaasiyaddana ugu saameynta badan Caalamku waa dowladda Mareykanka .
Waxay bannaanka soo dhigtay siyaasaddeeda ku wajahan Soomaaliya.
Kaaliyaha Arrimaha Siyaasadda ee Xogahayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Wendy Sherman, ayaa hadal nus saaca qaatay ka jeedisay Machadka USIP ee Washington shalay, hadalkaas oo dhammaantiis ku saabsanaa Siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Soomaaliya., waxaa xigay suaalo iyo jawaabo iyaguna qaatay qiyaastii nusa saaca kale.
Hadalka mas’uulkaas marka la isu geeyo waxaa aniga iiga muuqatay in Mareykanku uu dib ugu soo laabtay Soomaaliya, una soo jeestay in uu caawiyo, iskaashina la yeesho Soomaaliya shacab iyo Dowladba.
Waxay Sheegtay Wendy Sherman in mustaqbalka Soomaaliya aanuu ku xirneyn in caalamka kaalmo hor leh laga helo iyo xataa in Shabaab laga adkaado.
Su’aasha taariikhiga ah ee Mareykabku weydiiyay Soomaalida ayaa waxay tahay in aan dooneyno in aan ahaanno qabiillo jahawareersan, caalamka ka go’doonsan oo mid waliba midka kale uu dagaal kula jiro?
Iyo in aan dooneyno in aan ahaanno dal mideysan oo leh heybad, waajibaad iyo xuquuq?
Su’aashaas Soomaalida oo keliya ayaa ka jawaabi karta ayay tiri Wendy Sherman. Cid kale oo go’aankaas u gaari kartaa ma jirto. Laakiin ha ogaadeen hadday goostaan in ay noqdaan dal mideysan, in caalamku la garab istaagi doono kaalmo wax ku ool ah.
Madaxda Soomaaliya ha noqoto heer Federaal, heer maamul goboleed iyo weliba Jamhuriyadda Goonida isu taagtay ee Somaliland iyo xataa Ururrada Diinta iyo weliba Ganacsatada Xooggan ee dhinacyadaas kala duwan midba mid gooniya uu maalgelinayo.
Car yaa maanta Soomaali isu taaga? Car yaa si ficil ah uga jawaaba su’aashaas oo taariikhda baal dahab ah ka gala? Car yaa Caalamka af garta? Car yaa dhallinyarada maanta mustaqbal u horseeda? Car yaa caalamka nagala mid dhiga? Hadde waa Car!